Homeसमाचारनेपाली चलचित्रमा च’र्चित भएका तर अमेरिका गएपछि उतै स्था’पित भएका अभिनेत्रीहरू (भिडियाे रिपाेर्ट हेर्नुहोस्)
November 21, 2020 admin समाचार 6478
पछिल्लो सम’य कोही कसैले नेपाली चलचित्र क्षेत्रका नायिकाहरुको नाम सोध्छ भने नयाँ पु’स्ताको सोझो ज’वाफ हुन्छ – प्रियंका कार्की, आँचल शर्मा, केकी अधिकारी, स्वस्तिमा खड्का ल’गायत… ।
तर आफ्नो स’मयमा यी नायिकाहरुले भन्दा पनि धेरै चर्चा क’माएका अघिल्लो पुस्ताका अभि’नेत्रीहरुको नाम शायदै आज कसैले पनि लिँदैनन् । किनकी उनीहरु प्राय स’बैजसो नै चलचित्र क्षेत्रबाट प’लाइन भईसकेका छन् । फ’लस्वरुप समयको अन्तरालसँगै उनीहरुलाई दर्श’कहरुले पनि बि’र्सदै गएका छन् ।
हाल यो चलन कम देखिए पनि एक’ताकाको समय यस्तो थियो, जब कलाकारहरु कार्य’क्रमको बाहाना बनाई वि’भिन्न देशमा जान्थे अनि प्राय उतै बस्थे । जसमा सबैको तार्गेट अमेरिका पर्ने गर्दथ्यो । करिष्मा मानन्धर, गौरी मल्ल, सरोज खनाल लगा’यतका केही कलाकारहरु केहि वर्षको अमेरिका बसाईपछि नेपाल फ’र्किए पनि त्यस्ता धेरै कलाकारहरु अझै पनि अमेरिकामा नै स्था’पित भएर बसिरहेका छन् ।
नेपाली सिने जगतको तत्का’लीन सम’यमा ब्ल्याक ब्युटि उपमाबाट परि’चित अभिनेत्री हुन् ऋचा घिमिरे । २ दर्जन चलचित्र र थुप्रै टेलिचलचित्रमा अभि’नय गरिसकेकी अभिनेत्री ऋचाका छोडि गए पाप लाग्ला, गिरफ्तार, फर्ज, फैसला ल’गायत थुप्रै चलचित्र हिट लिस्टमा पर्छन् । तर दुर्भा’ग्यवश उनी अहिले नेपाली चलचित्र क्षेत्रबाट मात्र होईन नेपालबाट नै धेरै टाढा छिन् ।
विगत केहि वर्षदेखी उनी आफ्नो सप’रिवार अमेरिकाको बाल्टिमोरमा बसोबा’स गरिरहेकी छिन् । ३ सन्तानकी आमा बनिसकेकी ऋचा अमेरिका गएपछि एक’पटक पनि नेपाल फर्किएकी छैनन् ।
आज हामी तपाईंहरू सम’क्ष तिनै १५ अभिनेत्रीहरुको रिपोर्ट पस्कदैछौं जो सुन्दर भविष्य”को सपना सजाएर सधैंका लागि अमेरिका उडे ।-इताजा खबर बाट
हेरौं भिडियोमा :
कमेडियन भारती सिंह दम्पती प्रहरी नियन्त्रणमा, अनुसन्धान जारी
September 25, 2021 admin समाचार 1509
सबै संगीतले मानिसलाई आनन्द मात्र दिँदैन। कुनै कुनै गीतले आफ्नो ज्यान आफैंले लिने अवस्थामा लग्छन्। प्रेममाथि संसार`भरि नै अनेक विमर्श चल्छन्। प्रेममाथि लेखिए`को एउटा यस्तो गीत छ, जसले संसारका धेरै मानिसलाई ज्यान दिन पे्ररित गर्यो।
May 2, 2021 admin समाचार 3433
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज आइतबा’रका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ । तो’केको िवनिमय दर अनुसार आज अ’मेरिकी डलर एकको खरिददर ११८ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर ११८ रुपैयाँ ८० पैसा रहेको छ ।कतारी
August 25, 2020 admin समाचार 14806
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) सानो प्रयत्न’ले ठूलो काम बन्नेछ । धर्म तथा अध्यात्मतिर ध्यान जाने हुँनाले शरि’रले सकारात्मक उर्जा ग्रहण गर्नेछ । आफन्तहरुको सहयोगले उपलब्धिमुलक कामहरु बन्नेछन् भने दैनिकीलाई सहज रुपमा परिणत गर्न सकिनेछ । लामो दुरिको
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (220445)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (212105)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (211804)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (210551)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (209338)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (208460)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (206937)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (206725)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (194618)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (175635)